मधेसी के हो ? एउटा जात वा निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा बस्ने समुदाय ? «
मधेसी के हो ? एउटा जात वा निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा बस्ने समुदाय ?
प्रकाशित मिति : १२ जेष्ठ २०७६, आईतवार १४:५७
तपाईंको परिभाषामा मधेसी के हो ? एउटा जात वा निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा बस्ने समुदाय ? भन्ने प्रश्न अनलाईनखबर डटकमले भद्र र शालीन स्वभावका सिके लाललाई सोधिएको थियो । उनले पछिल्लो समयमा खरो लेखकको पहिचान बनाएका छन् । खासगरी मधेसका एजेन्डाहरुलाई लिएर उनी निकै चर्का लेखहरु लेख्ने गर्छन् । उनको उतर यस्तो थियो :-